Maitiro Ekugadzira Rako Rako Mutauro Kuti Morse Code Mushanduri | Mahara emahara
Nhasi tinodzoka neimwe yezvidzidzo zvedu zvinonakidza. Ino nguva ini ndoda kukuratidza chirongwa chakareruka kwazvo chinokutorera nguva pfupi yekuita uye icho chauchazokwanisa kuvaka mhando yemuturikiri kubva kumutauro wakanyorerwa Morse kodhi. Semazuva ese, chokwadi ndechekuti hatizopfuure projekiti uko a ndiro yechingwa uye a arduino bhodhi Sezvo, kana iwe uchida kuenda kumberi, zvese padanho re software uye maererano nekupedzisa kweprojekiti, iwe unofanirwa kuve iwe wekushandisa mhinduro, idiki, inokwezva.
Pfungwa inotanga kubva mukugadzira iyo Muturikiri wemhando ipi neipi yefonti, mazwi kana chirevo kune morse kodhi. Izvi zvakapusa sekushandisa bhodhi yeArduino iyo ichave iine software inodiwa yakatakurwa kuitira kuti, kubudikidza nezvinobuda, tinokwanisa kuita maLED mashoma kutaridzika zvinoenderana nezvazvinoreva mumutauro weMorse watiri kuratidza. Kunyora nyore nyore iwo mavara atinoda kududzira, isu tinoshandisa nhare mbozha yakagadzirirwa Android inoshanda sisitimu iyo inotumira iwo mameseji kuburikidza nekubatana kweBluetooth kubhodhi redu. Arduino UNO.
1 Mashoko anodiwa kuita chirongwa ichi
2 Matanho ekuita chirongwa ichi
3 Kubatana pakati peArduino bhodhi uye komputa
Mashoko anodiwa kuita chirongwa ichi
Sezvo isu tave nezvakawanda kana zvishoma kuyedza kuratidza mumitsara yekumusoro, kuti tiite chirongwa ichi isu tichazoda chaiwo zvinhu kunyangwe, kana iwe uchida nyika muiti, Ndine chokwadi chekuti hazvizonetsi kuti iwe uwane zvauri kushaiwa mune chero zvitoro zvako zvinowanzoitika kana usina, kunyangwe, sekutaura kwangu, vanowanzo zvinhu zvinowanzo shandiswa. Kunyanya, isu tichafanira kuve nerinotevera runyorwa:
Mwenje ina ye LED, 3 yeimwe vara uye chechina mwenje weumwe ruvara
Tambo dzinoverengeka kufambisa kubatana pakati pemidziyo, mune iyi kesi kubatanidza iyo bhodhi rechingwa uye yedu Arduino controller
Cable yekubatanidza iyo Ardunio kune USB yekuisa kuitira kuti utore software
Komputa ine Arduino IDE yakaiswa mushe uye USB yekubatanidza kubatanidza bhodhi
Nhare mbozha ine sisitimu inoshanda Android 2.2.1 kana kupfuura
Kana tangove nezvinhu zvese zvinodiwa zviripo, tinogona kuenderera nekuitwa kweprojekiti. Imwe pfungwa yekuisa mundangariro ndeye izvo chaizvo hazvidi kuti uve nebluadapter adapter inoshandiswa muchirongwa ichi kana kadhi Arduino UNO sekudaro sezvo chero imwe iine kubatana kwekutanga inogona kushandiswa, isu tichafanira kungoteerera kune zvinongedzo zvinoshandiswa kuitira kuti, semuenzaniso, mune iyo iyo digiti inoburitswa yegumi nenomwe Arduino UNO izvi zvinoenderana nekubuditsa kumwechete kwebhodhi rauri kushandisa.
Matanho ekuita chirongwa ichi
Kuti uite chirongwa ichi, pazasi, ini ndichataridza nhevedzano yematanho ane chekuita negungano nekubatana kwezvinhu zvese zvinoumba runyorwa rwekare rwatinofanira kutevedzera pakuitwa kwavo chaiko. Sezvazvinowanzoitika mune urwu rudzi rwepurojekiti, inzwa wakasununguka kuita chinja chero tambo yekodhi kana kuwedzera Hardware kuti ishanduke uye kunyange kunyatsoita mashandiro ayo sezvo chero mhando yekuvandudza inogara ichigamuchirwa.
Pakutanga tichaita iyo kubatana kwe Arduino UNO nebhodhi redu rechingwa. Kunyanya, zvinobuda zvinoshandiswa zvichave GND uye 3.3 V. Iyi mitsara ichatishandira, pakati pezvimwe zvinhu, kupa simba kune yedu Bluetooth adapta.
Kana tango gadzira kubatana uku, inguva yekurongedza yekuisa data uye kuburitsa yeabluetooth adapter nemadhijitari edhata uye mhedzisiro yeArduino bhodhi. Nenzira iyi tichava neadapter yedu yakanyatsobatana nekadhi zvese zviri zviviri kuitira kuti igamuchire yazvino uye kuti iwanikwe zvachose padanho rehunyanzvi kuti ikwanise kutanga 'teereraiyo data inosvika kwariri kuburikidza nezviteshi zvekupinda kweiyo Arduino UNO. Sehuwandu, ndikuudze kuti pane dzimwe nguva, nekuda kwekadhi rese ratinoshandisa uye neadapter yebluetooth, kubatana kwakashandiswa kunogona kusiyana, panguva ino, chinhu chakanakisa tarisa magwaro ekumisikidza adapter sezvo achiwanzo kuperekedzwa nemadhirama ekubatanidza.
Tinosvika pa 3 volt runyanga kubatana. Kune izvi isu tinoshandisa yedhijitari kuburitsa nhamba 13 ye Arduino UNO. Kubatana kunosara, senguva dzose, isu tinofanirwa kuibatanidza neGND kana pasi kuitira kuti mashandiro enyanga ave akarurama.
Ino ndiyo nguva batanidza ma LED akasiyana. Kuti urege kuyedza kuvhiringidzika, ndikuudze kuti zano ndere kubatanidza gumbo refu kwazvo raro, rakanaka, kune imwe yeinobuda Arduino UNO nepo ipfupi ichibatanidza yakananga kuGND kana pasi. Nenzira iyi taizoona kuti yekutanga yeGreen LEDs yaizobatana nedigital kuburitsa 12, inotevera kuburitsa 8, yechitatu green green kuburitsa 7 nepo iyo yega yebhuruu LED yaizobatana neinoburitsa digital 4.
Nhanho yekupedzisira, kana tangove neyese wiring yakagadzirira iri shandisa USB yekubatanidza tambo kubatanidza yedu Arduino UNO kukomputa uye nekudaro kukwanisa kuishongedza neyakakodzera software, iyo yatinozonyora nekunyora kubva kuArduino IDE pachayo.
Kubatana pakati peArduino bhodhi uye komputa
Imwe pfungwa inofanirwa kutariswa kana isu tine bhodhi rakabatana nekombuta kuti tizive kuti zvese zvinoshanda nemazvo, zvirinani musimboti, ndeyekuti bhodhi rinenge riine mwenje girini pairi nguva dzese sekureba sekunge uchiramba wakabatana nekombuta. Kune rimwe divi uye zvinoenderana neBluetooth adapter yatinoshandisa, iyi kazhinji ine mwenje mutsvuku unopenya nekuda kwekubatana kusiri kusimbiswa neiyo Android chishandiso iyo yatinozoshandisa kutumira mavara, zvirevo kana mazwi kuplate.
Ndinoziva kuti ruzivo rwepamusoro rungaratidzika sechimwe chinhu chaizvo 'tonto'asi ndinogona kukuvimbisa kuti anoshanda chaizvo, anodikanwa uye anonyanya kuratidza zviratidzo kana tichifunga kuti mukati memugadziri munharaunda vanogona kuvapo vanhu vari kutanga uye kuti, nekuda kweava vadiki 'tricks'ivo vanogona kunzwisisa kuti, zvirinani, izvozvi zvinosvika zvese kune adapta uye bhodhi pachayo.
Panguva ino isu tinongofanirwa kurodha kunyorera MOORI.apk zvakabatanidzwa. Ichi chishandiso chinofanirwa kuiswa pane yako nhare mbozha yakashongedzerwa neiyo Android inoshanda sisitimu. Kamwe kana yaiswa, iwe unongofanirwa kuvhura iyo application uye pfuurira mberi. Ino nguva sarudzo yatinonyanya kufarira ndeye 'Tumira Zvinyorwa', zvakafanana pane zvatinofanira kubaya kuti tiwane iyo. Kana tangopinda mukati tinofanirwa kubaya 'Batanidza' kuti titange kubatana neplate yedu.
Maitiro ekodhi akateverwa anotevera.
Paunenge iwe wawana iko kunyorera pane yako Android chishandiso uye uteedzere yapfuura nhanho, iwe unozogona kunyora chero tsamba, izwi kana chirevo. Paunenge uchinge wanyora zvaunoda, iwe unongofanirwa kubaya pane kutumira.
Kana iwo mavara akatambirwa nemazvo sisitimu inozo batidza mwenje oturika ruzha
Pfungwa ndeyekuti mwenje wekutanga wegirini uchaenderera uye kudzima kuti uone iyo 'poindi'. Nekudaro, hwamanda icharira uye kudzima panguva imwe chete.
Iwo wechipiri uye wechitatu mwenje girini uchabatidza uye kudzima kuti uone iyo 'mutsara' mukutendeuka. Nyanga, senge mune yakapfuura kesi, ichavhura uye kudzima panguva imwe chete.
Pakupedzisira mwenje wechina, ndiko kuti, mwenje webhuruu, unovheneka uye kudzima kuti uone kuguma kwechimiro, izwi kana chirevo. Kana paine imwe mhando yenzvimbo pakati peumwe neumwe hunhu, izwi kana chirevo, mwenje uyu unobatidza uye kudzima kaviri.
Sezvo mapoinzi ekufunga nezvazvo, ingokuudza iwe kuti mune iyi kesi Android application yaitwa nekuda kweApp Inventor, iri nyore nzira yekugadzira kodhi uye dhizaini yechishandiso inozozoitwa gare gare pane chishandiso chakagadzirwa neinoshanda. system yakagadzirwa neGoogle mainjiniya.
Mamwe ruzivo uye ruzivo: zvinodzidziswa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Gadzira mutauro wako wega kune morse kodhi muturikiri
3 nzira dzekuvaka yemahara spy kamera